Ndakazvamburwa nemboro nasupervisor mufridge yekubasa – Vanoda Zvinhu
On May 10, 2016 March 1, 2018 By svirorist
Nyaya yangu yakaitika ndayenda kuSA kunotsvaga basa ndokubva ndariwana muneimwe restaurant muPretoria.
Yainge iri Monday and always this day raigara riri quiet zvekuti manager ndipo paaiyenda paOff and most of the staff taishanda tiri 3 waiters,supervisor nekitchen staff yese saka mostly taicleaner hedu. Pandakasvika ndakaona ndanyorerwa duty rekuti ndicleane walk in fridge then ndizorongedza zvinhu zvakanaka again before vanhu venight shift vauya.
Ndakasvika ndikananga mustoreroom kunoita duty rangu ndikawana supervisor yakatozorora hayo akagara achitamba nefoni yake fridge yainge yadzimwa the previous night saka yainge yatoita defrost saka ndaida kungobvisa mvura then repack zvinhu zvese.
Supervisor akasimuka ndakurongedza zvinhu ndokubva andirova magaro first ndokubuda achimhanya, akadzoka ndakafongora pane imwe fridge ndichitora stock ndichidzosera mufridge iya hombe ndokubva awuya pamashure pangu ndokundibata chiuno haaa Doctor ndakanzwa kutekenyedzwa iye ndokutanga kuita semunhu ari kundikoira asi ainge akapfeka hembe dzake achitamba hake.Ndakamuudza kuti ndane nguva ndisati ndasvirwa ngaasatambe nezvinhu zvaasingagone kupedza ndikaona munhu achitofa nekuseka hake zvikanzi ingobvisa bhurugwa uwone zvandinokuita izvozvi.
Ndakapinda mufridge ndokubva ndamuti kurumidza shamwari beche rangu risati ratorwa apa ndaisa jean mumabvi ndokubva anhonga condom kuseri kwedoor atainge tapihwa nevanhu vehealth musi wacho tichitoseka kuti hapana munhu anokwirirwa kubasa asi musi uyu zvakatoitika ndokubva ainyudza masikati machena zuva rakati tiii zvaiva zvenguva shoma chete asi munhu akatunda kuzadza condom kuita kunge kapaindi kemukaka ndakatoshaya kuti huronyo ihwohwo sei wakabva wawanda kudaro.
Akangoti ndanga ndane 5 months ndisati ndasvira sha ndosaka ndatoita 2mins chete ndichibva ndamuti hausi kuda kuyenda neni here ndinorara kwako. Akangoseka ndokubva zvaperera ipapo.
PREVIOUS POST Previous post: Ndakasvirwa nefudza mombe ndayenda kumusha ndikabva ndakanganwa kuti ndakaroorwa!
NEXT POST Next post: Threesome nemaTwins Kubhawa! Ende vakazondipedzera!